ဘာစီလိုနာ ကစားသမားတွေရဲ့ တစ်ပတ်လစာပမာဏစာရင်း ထွက်ပေါ်လာပြီ
ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ လစာငွေအများဆုံး ရရှိနေတာ ဘယ်သူတွေများဖြစ်မလဲ
16 Aug 2018 . 5:22 PM
ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကျော်ကြားဆုံးအသင်းတွေထဲက တစ်သင်းဖြစ်တာကြောင့် ဒီလိုအသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ ကစားသမားတွေဟာလည်း မြင့်မားတဲ့လစာငွေ ရရှိနေတာ သိပ်တော့မဆန်းပါဘူး။ အခုလောလောဆယ်တော့ အာဂျင်တီးနား နာမည်ကြီးတိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ Messi က အားကစားလောကရဲ့ ကမ္ဘာ့လစာငွေအများဆုံး ထိပ်ဆုံးစာရင်းမှာ ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကုန်မှာ အင်နီယေစတာ Iniesta ၊ ပေါ်လင်ဟို Paulinho ၊ အန်ဒရေဂိုးမက်စ် Andre Gomes ၊ ယဲလ်ရီမီနာ Yerry Mina တို့ ဘာစီလိုနာနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တာကြောင့် လစာငွေ ပေးချေရမှုက လျော့ကျသွားခဲ့ရတယ်။ လက်ရှိ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေထဲမှာ ဘယ်သူတွေက လစာဘယ်လောက်ရနေလဲ၊ တစ်ပတ်လစာ အများဆုံးရရှိနေတဲ့ ကစားသမားတွေက ဘယ်သူများလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
Sergi Samper, £10,000/week
Marlon Santos, £20,000/week
Thomas Vermaelen, £55,000/week
Jasper Cillessen, £55,000/week
Denis Suárez, £60,000/week
Sergi Roberto, £70,000/week
Clément Lenglet, £70,000/week
Nelson Semedo, £75,000/week
Samuel Umtiti, £75,000/week
Paco Alcacer, £90,000/week
Marc-Andre ter Stegen, £90,000/week
Jordi Alba, £100,000/week
Ivan Rakitic, £130,000/week
Gerard Pique, £165,000/week
Arturo Vidal, £165,000/week
Sergio Busquets, £185,000/week
Ousmane Dembele, £220,000/week
Philippe Coutinho, £240,000/week
Luis Suarez, £290,000/week
Lionel Messi, £500,000/week
ကဲ .. ပရိသတ်ကြီးရေ .. ဒါတွေကတော့ ဘာစီလိုနာကစားသမားတွေရဲ့ တစ်ပတ်လစာငွေပါပဲ။ ဒါကို ဖတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ဘာစီလိုနာ ပရိသတ်တွေလည်း ကိုယ်အားပေးတဲ့ ကစားသမားတွေ လစာငွေ ဘယ်လောက်ရသလဲဆိုတာကို တခြားပရိသတ်တွေကို ကြွားလို့ရပြီပေါ့ . . .
ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ လစာငှအေမြားဆုံး ရရှိနတော ဘယျသူတှမြေားဖွဈမလဲ
ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အကြျောကွားဆုံးအသငျးတှထေဲက တဈသငျးဖွဈတာကွောငျ့ ဒီလိုအသငျးမှာ ကစားနတေဲ့ ကစားသမားတှဟောလညျး မွငျ့မားတဲ့လစာငှေ ရရှိနတော သိပျတော့မဆနျးပါဘူး။ အခုလောလောဆယျတော့ အာဂငျြတီးနား နာမညျကွီးတိုကျစဈမှူး မကျဆီ Messi က အားကစားလောကရဲ့ ကမ်ဘာ့လစာငှအေမြားဆုံး ထိပျဆုံးစာရငျးမှာ ပါဝငျနတောဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီကုနျမှာ အငျနီယစေတာ Iniesta ၊ ပျေါလငျဟို Paulinho ၊ အနျဒရဂေိုးမကျဈ Andre Gomes ၊ ယဲလျရီမီနာ Yerry Mina တို့ ဘာစီလိုနာနဲ့ လမျးခှဲခဲ့တာကွောငျ့ လစာငှေ ပေးခရြေမှုက လြော့ကသြှားခဲ့ရတယျ။ လကျရှိ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ ကစားသမားတှထေဲမှာ ဘယျသူတှကေ လစာဘယျလောကျရနလေဲ၊ တဈပတျလစာ အမြားဆုံးရရှိနတေဲ့ ကစားသမားတှကေ ဘယျသူမြားလဲဆိုတာ ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
ကဲ .. ပရိသတျကွီးရေ .. ဒါတှကေတော့ ဘာစီလိုနာကစားသမားတှရေဲ့ တဈပတျလစာငှပေါပဲ။ ဒါကို ဖတျပွီး မွနျမာနိုငျငံက ဘာစီလိုနာ ပရိသတျတှလေညျး ကိုယျအားပေးတဲ့ ကစားသမားတှေ လစာငှေ ဘယျလောကျရသလဲဆိုတာကို တခွားပရိသတျတှကေို ကွှားလို့ရပွီပေါ့ . . .